Ny statistikan'ny bilaogy Blogconomy | Martech Zone
Ny statistikan'ny bilaogy Blogconomy
Alahady, Aogositra 25, 2013 Douglas Karr
Tsarovy rehefa nilaza ny olona fa ny fanaovana bilaogy dia maty? Efa folo taona izao aho no nitoraka bilaogy ary manana ny fahombiazako, ny bokiko, ny orinasako ary ny asako amin'ny fanaovana bilaogy. Nandritra ny taona maro nitorahana bilaogy, dia nitaona hery mitaona, fahefana ary ampy fanarahana iray izay ahafahanay mizaha orinasa mitombo manampy ny mpanjifanay amin'ny ezak'izy ireo amin'ny marketing. Tsy miresaka momba ny tombontsoa fotsiny no resahiko - fa manohy mijinja ireo tombony azoko!
Ity dia topy topimaso tsara momba ny Blogconomy by Ignite Spot. Nahazo torohevitra marim-pototra amin'ny lahatsoratr'izy ireo izy ireo - bilaogy isan-kerinandro, manoratra atiny mahasoa, manana antso ho amin'ny hetsika hatrany, ary manana mailaka mailaka hisamborana ny mpisoratra anarana. Toy ny media marketing rehetra, ny ezaka ataonao dia miteraka valiny. Raha afaka mandefa isan'andro ny orinasanao - manomboka amin'ny tantaran'ny mpanjifa, mampiasa tranga, hatrany amin'ny vaovaon'ny orinasa sy torohevitra momba ny indostria - afaka mandeha haingana ianao any!
Tags: fitorahana bilaogystatistikan'ny bilaogybilaogy orinasa
Ny orinasanao dia eo anelanelan'ny mpanjifa sy izay tadiavin'izy ireo?
12 Nov 2013 amin'ny 4:22 maraina
Ataovy ny enti-mody, ny fanendrena kaonty
miaraka amin'ny vahaolana momba ny enti-mody sy ny fanampiana ny fampianarana momba ny kaonty. Our
ny fanampiana entimody dia manampy anao hanao ny enti-mody sy ny kaontinao
Tsidiho indray mandeha http://www.homeworkhelpindiadotcom